ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည် 32 သို့မဟုတ် 64 bits ရှိမရှိ - VidaBytes | LifeBytes
ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည် 32 သို့မဟုတ် 64 bits ရှိမရှိကို မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
Encarni Arcoya | 30/05/2022 09:27 | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 31/05/2022 08:34 | လဲ tutorial
ကောင်းမွန်တဲ့ ဒီဇိုင်းပရိုဂရမ်တစ်ခုကို သင်ဝယ်လိုက်တယ်လို့ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ၎င်းကို သင့်ကွန်ပြူတာတွင် ထည့်သွင်းလိုပြီး လိုအပ်ချက်များကို စစ်ဆေးသောအခါတွင် ၎င်းသည် 64-bit ပရိုဆက်ဆာကို ထည့်သွင်းထားကြောင်း သိလိုက်ရပါသည်။ 64? ပြီး​တော့ ရင်​ထဲ ရှုပ်​သွား​ရော။ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည် 32 သို့မဟုတ် 64 bits ရှိမရှိကို မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။ သူတို့ကြားက ဘာကွာခြားချက်ရှိလဲ။
သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီမေးခွန်းကို မကြာခဏမေးပြီး မသိသေးရင်၊ ဒီဒေတာကို ဘယ်လိုရယူရမလဲဆိုတာ သင်ပေးသွားမှာပါ။သင့်တွင် Windows၊ Linux သို့မဟုတ် Mac ရှိပါသလား။ ၎င်းကို သွားကြပါစို့။
1 32 သို့မဟုတ် 64 ဘစ်ပရိုဆက်ဆာက ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။
2 ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည် 32 သို့မဟုတ် 64 bits ရှိမရှိကို မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
2.1 ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည် Windows တွင် 32 သို့မဟုတ် 64 bits ရှိမရှိကို မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
2.2 ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည် Linux တွင် 32 သို့မဟုတ် 64 bits ရှိမရှိကို မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
2.3 Mac တွင် 32 သို့မဟုတ် 64 ဘစ်
32 သို့မဟုတ် 64 ဘစ်ပရိုဆက်ဆာက ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။
မင်းသိတဲ့အတိုင်း, ကွန်ပြူတာတစ်လုံး၏ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ CPU ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် အရာအားလုံးကို ထိန်းချုပ်မည့် ဦးနှောက်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ ဒါက bits နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် 32 သို့မဟုတ် 64 ကိုထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါက တခြားအချက်တွေပေါ်မှာ မူတည်နေပြီ။
ပထမတစ်ချက်မှာ အသိပညာမရှိဘဲ 64-bit ပရိုဆက်ဆာသည် 32-bit တစ်ခုထက် အမြဲတမ်းပိုကောင်းနေမည်ဟု သင်ပြောနိုင်သည်။ ပြီးတော့ အမှန်တရားက မင်းမှားမှာမဟုတ်ဘူး။
တကယ်တော့ ဒီဂဏန်းတွေ သင့်ကွန်ပျူတာ၏ အချက်အလက်ပမာဏ အနည်းအများ သို့မဟုတ် ပမာဏကို စီမံဆောင်ရွက်နိုင်မှုစွမ်းရည်နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။. သင့်အား အကြံဥာဏ်တစ်ခုပေးရန်၊ သင့် CPU သည် 32 bits ဖြစ်ပါက၊ ၎င်းသည် ဖြစ်နိုင်ချေတန်ဖိုး 4.294.967.296 ခန့်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ၎င်းအစား 64-bit ဖြစ်ပါက 18.446.744.073.709.551.616 ရှိသည်။ သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း ကွာခြားချက်မှာ အလွန်မြင့်မားပြီး လူများစွာသည် 64-bit ထက် 32-bit ကွန်ပျူတာကို ပိုနှစ်သက်စေသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ CPU သည် 32-bit ဖြစ်သောအခါ RAM သည်4GB သာအသုံးပြုနိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည် 64-bit ဖြစ်ပါက၊ သင်သည် ထိုကန့်သတ်ချက်ကို 16GB RAM အထိ တွန်းအားပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အနည်းနှင့်အများ စွမ်းရည်ရှိမည်။ သတင်းအချက်အလက် စီမံဆောင်ရွက်ရန်။
စွမ်းဆောင်ရည် အနည်းနှင့်အများ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။.
ကွန်ပြူတာ ရပ်သွားလျှင် သက်သာသွားပါမည်။ အချက်အလက်များစွာကို ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အသက်အရွယ်လည်း လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ကို သတိပြုပါ။. 10-12 နှစ်ခန့်ကြာသည်အထိ ရောင်းချခဲ့သော ကွန်ပျူတာအားလုံးနီးပါးတွင် 64-bit ဗိသုကာတစ်ခုရှိသည်။ ဒါပေမယ့် 32-bit တွေကို အစွမ်းထက်တဲ့ကွန်ပြူတာတစ်လုံးရှိဖို့ မခက်ခဲစေမယ့် ပရိုဂရမ်တွေနဲ့ XNUMX-bit တွေကို သုံးနေတုန်းပါပဲ။
နောက်ပိုင်းတွင် 64 bits ဖြင့် စတင်ခဲ့သော Apple မှလွဲ၍ ကျန်အားလုံးသည် အားကောင်းပြီး မြန်ဆန်သော ကွန်ပျူတာများကို ပေးဆောင်နေပြီဖြစ်သည်။
ယခု သင့်တွင် အခြေခံတစ်ခုရှိပြီး 32 သို့မဟုတ် 64 ဘစ်ပရိုဆက်ဆာများက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုလိုရင်းကို သင်သိပြီးဖြစ်သောကြောင့် သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် ဤဒေတာကို သင်မည်ကဲ့သို့ရနိုင်သည်ကို ပြသရန်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်သည်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့, Windows ရှိခြင်းသည် Mac သို့မဟုတ် Linux ရှိခြင်းနှင့်မတူကြောင်း သင်သိသင့်သည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လည်ပတ်မှုစနစ်တစ်ခုစီတွင် ဒေတာသည် တစ်နေရာ သို့မဟုတ် တစ်နေရာတွင် ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မပူပါနဲ့၊ အဲဒါကို ရှာတွေ့ဖို့ မခဲယဉ်းစေဖို့အတွက် သော့အားလုံးကို မင်းကို ပေးမှာမို့လို့ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည် Windows တွင် 32 သို့မဟုတ် 64 bits ရှိမရှိကို မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
ဒီနေ့ကစပြီး Windows နဲ့စလိုက်ရအောင်။ လည်ပတ်မှုစနစ်အဖြစ် အများဆုံးအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။. သင်သိသည့်အတိုင်း Windows7မှ Windows 11 အထိ ဗားရှင်းများစွာရှိနေပြီဖြစ်သည်။
သင့်ကွန်ပြူတာနှင့်ပတ်သက်သော အကောင်းဆုံးနှင့် ယုံကြည်ရဆုံးသောဒေတာများရရှိရန် သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အဆင့်များ နှင့် ၎င်း၏ပရိုဆက်ဆာပါရှိသော bit များသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် ။
Windows File Explorer ကိုဖွင့်ပါ။. ဤနေရာတွင် ညာဘက်ကော်လံတွင် သင်သွားသင့်သည်။ ဒီအဖွဲ့. ညွှန်ပြပြီးသည်နှင့် ၎င်းကို ညာကလစ်နှိပ်ပါ (ထိုစကားလုံးများပေါ်တွင် သင့် cursor ကို ထားရှိပါ။) မီနူးတစ်ခု ပေါ်လာပါမည်။
ဝင်တိုက်တတ်ပါတယ်။. ယခု သင်သည် မျက်နှာပြင်အသစ်တစ်ခုသို့ ဝင်ရောက်လာပါလိမ့်မည်။ အပိုင်းကိုရှာပါ «Processor ကို» အဲဒီမှာ မင်းရဲ့ processor၊ အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ မော်ဒယ်ကို သိလိမ့်မယ်။ ထို့နောက် အမှတ်အသားပြုပါ "စနစ်အမျိုးအစား» သင့်ကွန်ပြူတာသည် 32 သို့မဟုတ် 64 bits ရှိမရှိ သင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အခုတော့ သင့်ကွန်ပြူတာသည် 32 bits ဖြစ်သည်ဟု ပြောနိုင်ပြီး လက်တွေ့တွင် ၎င်းသည် 64 ဖြစ်သည်။. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် 64-bit ကွန်ပျူတာများသည် 32-bit ကွန်ပျူတာများနှင့် အမြဲသဟဇာတဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ယခင်အဆင့်များက ပြန်ပေးသော ဒေတာများသည် မှားယွင်းနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါဆို ဘာလုပ်ရမလဲ။ နှစ်ချက်စစ်ဆေးပါ။ အဲဒါအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် ရှိနေရမည်ဖြစ်သည်။.
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးဆောင်သောထိုစခရင်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် « ကိုနှိပ်ရပါမည်။အဆင့်မြင့်သောစနစ်ဆက်တင်များ“ ၎င်းသည် သင့်အား တက်ဘ်များစွာပါသည့် ပိုသေးငယ်သော စခရင်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Advanced Options တွင်၊ အဆုံးတွင် « V ကိုနှိပ်ပါ။ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများ…»။ ဤတွင် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဝင်းဒိုးအသစ်တစ်ခုပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေရန် «PROCESSOR_ARCHITECTURE"။
ဤတွင် သော့လာပါသည်။ AMD64 သည် သင့်တွင် 64-bit ကွန်ပျူတာတစ်ခုရှိသည်။။ ဒါပေမယ့် AMD86 သို့မဟုတ် AMDx86 ဟုပြောပါက၊ သင်၏ပရိုဆက်ဆာသည် 32-bit ဖြစ်သည်။.
ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည် Linux တွင် 32 သို့မဟုတ် 64 bits ရှိမရှိကို မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
သင်အသုံးပြုနေသော operating system သည် Linux ဖြစ်ပါက အထက်ဖော်ပြပါ အဆင့်များသည် သင့်အတွက် အလုပ်မဖြစ်ပါ။ ဒါပေမယ့် Data တွေကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုလဲ?
အဆင့် 1: terminal ကိုဖွင့်ပါ။. ၎င်းသည် MSDos ဝင်းဒိုးနှင့်တူကြောင်း သင်သိထားပြီးဖြစ်သည်။
အဆင့် 2: command: iscpu ကိုရိုက်ပါ။ enter ခေါက်ပါ။ သင့်စကားဝှက်ကို တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ သူမကိုပေးပါ။
၎င်းသည် သင့်အား စခရင်ပေါ်တွင် စာသားအနည်းငယ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ပထမစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းမှာ သင်ရှာဖွေနေတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပေးပါလိမ့်မယ်။. Windows မှာလည်း အလားတူပါပဲ။ "CPU လည်ပတ်မှုမုဒ် 32-ဘစ်၊ 64-ဘစ်" ဟုပြောပါက သင့်ကွန်ပျူတာသည် 64-ဘစ်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဒါပေမယ့် "32-bit CPU Operation Modes" လို့ပြောရင် 32-bit ပဲရှိပါတယ်။
Mac တွင် 32 သို့မဟုတ် 64 ဘစ်
နောက်ဆုံးတွင်၊ Mac ၏ကိစ္စရပ်တစ်ခုရှိသည်။ အမှန်တရားမှာ သင်လိုအပ်သောကြောင့် ဒေတာကိုရယူရန်အတော်လေးလွယ်ကူသည်မှာ ဤသဘောမျိုးဖြစ်သည်။
Iသင်၏ taskbar ကို Ra သင့်တွင် Mac ပန်းသီးအိုင်ကွန်ရှိသည့်နေရာ၊ pulsar.
ယခု "About This Mac" သို့မဟုတ် "System Information" ကို ညွှန်သင့်သည်။“ ၎င်းသည် သင့်ကွန်ပြူတာအချက်အလက်နှင့်အတူ ဝင်းဒိုးတစ်ခုဖွင့်မည်ဖြစ်ပြီး သင့်ပရိုဆက်ဆာအမည်ကို သင်သိမည်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ ပြတင်းပေါက်၊ Hardware အပိုင်းတွင်တူညီသောဒေတာကိုရယူရန်သင့်အားခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့် 32 သို့မဟုတ် 64 bits လားဆိုတာ သင်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပြူတာသည် 32 သို့မဟုတ် 64 bits ရှိမရှိကို မည်သို့ပြောပြရမည်ကို တွေးဖူးပါက၊ သင့်တွင် ကလစ်နှိပ်ရုံဖြင့် အဖြေရပြီးသားဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » လဲ tutorial » ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည် 32 သို့မဟုတ် 64 bits ရှိမရှိကို မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
Instagram အီးမေးလ်ကို ပြောင်းပါ။
လေယာဉ်ပျံမုဒ်- ၎င်းသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် အဘယ်အရာအတွက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို မည်သို့စတင်ရန်နှင့် ပိတ်ရန်